Sifuna ingane: isikhathi esingcono okukhulelwa ingane
Imibhangqwana eminingi abazi kanjani ukubala ngesikhathi sokuhlala kwesisu. Bakholelwa ukuthi ukukhulelwa kudingeka ucansi njalo nokuntuleka Ukuvikelwa. Lokho kungase kube njalo, kodwa bambalwa kakhulu abantu bazi iqiniso lokuthi ngenyanga usalelwe izinsuku ezimbalwa lapho umlingani zesifazane kungaba ayakhulelwa. Ikhono wokukhulelwa wengane incike ukuvundisa abesifazane umjikelezo kokuya kwawo esikhathini.
Ukuze uzokhulelwa, kubalulekile ukuthi ukukhiqizwa kwamaqanda livelile futhi iqanda is avundiswa ngu isidoda izinga umlingani wakhe ngokocansi. Njengomthetho, ezimweni ekahle, kwenzeka ngosuku lwe-14 ngemva kokuba ukuqala kokuya esikhathini - lokhu isikhathi esingcono conception izingane. Kepha yilowo nalowo owesifazane uhlukile, futhi ngenxa yalokho isikhathi nge-ovulation Ungahambisa izinsuku ezimbalwa phambili noma emuva. Kulokhu, iqanda ngokwayo, ukhululeka esibelethweni, abavuthiwe follicle evelele, uhlala iphila kuphela angu-24, kuyilapho isidoda besilisa asebenzayo izinsuku 5-7 emva ejaculation.
Ukuze ugcine ithrekhi isikhathi esingcono okukhulelwa ingane, ungasebenzisa ukuhlolwa ukucacisa ukukhiqizwa kwamaqanda. Basuke ilungiswe ukukhululwa komzimba luteinizing i-hormone (LH) - esiphezulu yayo siyithola lapho strip wesibili on the control ukuhlolwa kuba licace. Ngemva LH isiqongo ezingeni ovulating esibelethweni amahora 12-48 - ngalesi sikhathi kwesikhathi olungavikelekile ngocansi kungaholela sokukhulelwa oyifunayo.
Nquma isikhathi esingcono conception izingane ngangokunokwenzeka, ngokuvakashela ihhovisi US kanye nokusetshenziswa kwemali follikulometriyu. Ngalesi, udokotela elawula inqubo, njengoba ukukhula follicle evelele. It ikani elilodwa ngosuku ukunquma usuku nge-ovulation bese qinisekisa ke ukuba khona le Corpus luteum e esibelethweni kanye khulula uketshezi pozadimatochnom isikhala. Ngokuvamile, amaqanda ikhishwe lapho evelele usayizi follicle 20-25 mm.
Yokukala basal umzimba lokushisa intando futhi ukukusiza uqonde yakho umzimba futhi unqume ukuthi iziphi izinsuku menstrual cycle eza okungcono isikhathi ekhulelwa ingane. Ukuze abale kahle izinsuku evundile, kumele kwezinye izimo wahlangana: ukukala izinga lokushisa (rectal), izinga lokushisa elifanayo esikhathini esifanayo nsuku zonke. Lokushisa ukufundwa ungakwazi ukugubha ku iqabunga yokuxhuma iphuzu yonke izilinganiso. Ngenxa yalokho, kufanele uthole ijika nge ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu lokushisa maphakathi nawo-umjikelezo - lena yi-ovulation.
Nakani izibonakaliso ovulation indlela. Njengomthetho, izinsuku 1-2 ngaphambi zokucucuza kwakhe kuba sengathi iqanda omhlophe, nokukhulisa isifiso sobulili. Ngalezo zinsuku, owesifazane azizwa yimpumelelo kakhulu futhi enhle, futhi lokhu edonsela wobulili obuhlukile.
Abaningi bayazibuza, kungenzeka ukuba akhulelwe ingane esesikhathini. Uma sicabanga ukuthi isidoda sisinde kule imvelo azibukhali abesifazane zingakapheli izinsuku 5-7 emva ejaculation, kanye nge-ovulation okwakwenzeke ngaphambili (emjikelezweni sezinsuku ezingu-9-11), khona-ke kungaba ukuthi ukukhulelwa kuphazamisa Kungenzeka.
Amadivaysi-X-ray: izinhlobo kudivayisi kanye nezimiso yokusebenza
Ovulatory syndrome - kungaba zidinga ukwelashwa?
Non-kuhlinzwa ubuso khuphula
Umtholampilo "eScandinavia", eSt Petersburg. Umtholampilo "eScandinavia" ngesikhathi Foundry
Ukwahlukanisa nensimbi Alloys
Yaroslavl Amahhotela - isikhathi ibhizinisi, isikhathi fun
Indlela ugeza lwamafutha izingubo: ngezindlela eziningana
Ukukhilosha ibhande: idayagramu kanye nencazelo imikhiqizo futhi sisihle
Kuyini ukubaluleka kwezilwane ezincelisayo emvelweni nasekuphileni komuntu?
Yini ongasinikela ingane yakho ngezinyanga ezingu-3? Imenyu ngomntwana ezinyangeni ezingu-3
Bugaboo Cameleon 3 - stroller iphupho noma inganekwane, njengoba owawusekelwe ngokoqobo
Haircuts kwabesifazane emva kweminyaka 40. okukhethwa kukho zezinwele
Ezokungcebeleka eTurkey - indawo ephelele uphumule
Tours eVietnam - akuyona kuphela eliphezulu nokushiya engabizi, kodwa futhi ithuba yezitolo inzuzo